ESI HỌRỌ OTU SSD MAKA KỌMPUTA - SSD - 2019
Ugbu a, SSD na-eji nwayọọ nwayọọ dochie draịva siri ike. Ọ bụrụ na ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya, SSDs dị obere ma, dị ka usoro, eji iji wụnye usoro, ugbu a enweela disks nwere ike nke 1 terabyte ma ọ bụ karịa. Uru nke ngwa ndị dị otú ahụ doro anya - ọ bụ mkpọtụ, nnukwu ọsọ na ntụkwasị obi. Taa, anyị ga-enye ụfọdụ ntụziaka banyere otu esi eme nhọrọ ziri ezi nke SSD.
Atụmatụ ụfọdụ maka ịhọrọ SSD
Tupu ịzụta disk ọhụrụ, i kwesịrị ịṅa ntị na ọtụtụ ọnụọgụgụ nke ga - enyere gị aka ịhọrọ ngwaọrụ ziri ezi maka usoro gị:
Kpebie ego SSD;
Chọpụta ụdị njikọ dị na sistemụ gị;
Lezienụ anya na "nsị" diski.
Ọ bụ maka ihe ndị a, anyị ga-ahọrọ ụgbọala, ya mere ka anyị lelee onye nke ọ bụla n'ime nkọwa.
Ngwongwo steeti siri ike dị ogologo karịa ngwa mgbati, ya mere, ị gaghị azụ ya maka otu afọ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịbịakwute nhọrọ nke oke.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji SSD maka usoro na mmemme, mgbe ahụ na nke a, 128 GB mbanye ga-ezu. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji dochie anya ọkpụkpọ mbụ, mgbe ahụ na nke a, ọ bara uru ịtụle ngwaọrụ na ikike nke 512 GB ma ọ bụ karịa.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị njọ, ọkwa mpịakọta na-emetụta ma ogologo oge na ịgụ / ide ọsọ. Nke bụ eziokwu bụ na site n'ọtụtụ nchekwa, onye nwe ọrụ nwere ohere ka ukwuu iji kesaa ibu na sel nchekwa.
Dị ka ọ dị na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, SSD maka ọrụ aghaghị ijikọ na kọmputa. Njikọ Njikọ kachasị ọnụ bụ SATA na PCIe. Ngwa PCIe dị ngwa karịa SATA ma bụrụkarị kaadị. Ngwaọrụ SATA nwere ọdịdị dị ụtọ karị, ha dịkwa nhata, ebe ọ bụ na ha nwere ike ijikọ ma kọmputa ma laptọọpụ.
Otú ọ dị, tupu ịzụta disk, ọ bara uru ilele ma enwere PCIe ma ọ bụ SATA njikọ na motherboard.
M.2 bụ ihe njikọ SSD ọzọ nwere ike iji bọs SATA na PCI-Express (PCIe). Akụkụ bụ isi nke diski na njikọ dị otú ahụ bụ compactness. Na mkpokọta, enwere nhọrọ abụọ maka njikọ - na isi B na M. Ha dị iche na ọnụ ọgụgụ nke "oke". Ọ bụrụ na akpa ikpe (igodo B) enwere otu ọhụụ, mgbe ahụ na nke abụọ, e nwere mmadụ abụọ.
Ọ bụrụ na anyị tụnyere ọsọ nke njikọ njikọ, mgbe ahụ ngwa ngwa bụ PCIe, ebe ọnụego data nwere ike iru 3.2 GB / s. Mana SATA - aka 600 MB / s.
N'adịghị ka mgbidi HDDs, a na-echekwa data na ebe nchekwa pụrụ iche na ihe nkedo siri ike. Ugbu a, a na-enweta draịva abụọ na ebe nchekwa a - MLC na TLC. Ọ bụ ụdị ebe nchekwa nke na-ekpebi akụ na ngwa ngwa nke ngwaọrụ ahụ. Ọrụ kachasị elu ga-adị na diski na ụdị MLC, ya mere ha kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-edetụ, ihicha ma ọ bụ bugharịa nnukwu faịlụ. Otú ọ dị, ọnụahịa ndị dị otú ahụ dị nnọọ elu.
Lee kwa: NAND flash ụdị ebe nchekwa
Maka ọtụtụ kọmputa na kọmputa, ụgbọala TLC zuru oke. Na ngwa ngwa, ha dị ala karịa MLC, mana ka ọ ka dị elu karịa ngwaọrụ nchekwa nchekwa.
Ndị na-emepụta ihe n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ọ bụghị ọrụ ikpeazụ na nhọrọ nke diski na-arụpụta ndị mgbawa. Onye ọ bụla n'ime ha nwere ọganihu ya. Ya mere, ndị na-achịkwa akpụkpọ ụkwụ SandForce na-ewu ewu. Ha nwere ọnụ ala na ịrụ ọrụ ọma. Akụkụ nke ibe ndị a bụ iji mkpakọ data mgbe ị na-ede ihe. N'otu oge ahụ, enwerekwa ihe dị ịrịba ama - mgbe disk dị ihe karịrị ọkara zuru oke, ịgụ / dee ọsọ na-adaba n'ụzọ dị mkpa.
Disks nwere ihe dị iche iche site na Ojuju nwere ezigbo ọsọ, nke pasent nke njuputa na-emetụta. Naanị azụghachi ebe a bụ ụgwọ dị elu.
Samsung na-emepụta ibe maka ndị agha siri ike. Otu akụkụ nke ndị ahụ - ezoro ezo na ọkwa ngwaike. Otú ọ dị, ha nwere ntụpọ. N'ihi nsogbu ndị nwere nchịkọta nchịkọta ihe mkpofu, ọsọ ọsọ / ederede nwere ike ibelata.
Mkpụrụ ege Fizon nwere oke arụmọrụ na ọnụ ala. Enweghị ihe na-emetụta ọsọ, ma n'akụkụ aka nke ọzọ, ha adịghị arụ ọrụ nke ọma na ide na ịgụ ihe.
LSI-SandForce bụ onye na-eme ihe mgbawa ọzọ maka ndị na-achịkwa steeti. Ngwaahịa sitere n'aka onye ọrụ a bụ ihe nkịtị. Otu n'ime njirimara bụ mkpakọ data mgbe ị na-ebufe na NAND Flash. N'ihi ya, olu nke ozi ederede na-ebelata, nke n'aka nke ya na-azọpụta akụ nke ụgbọala n'onwe ya. Mwepu bụ mbelata ọrụ nchịkwa na oke ibu nchekwa.
N'ikpeazụ, onye mgbawa ọhụrụ bụ Intel. Ndị nchịkwa dabeere na ibe ndị a na-egosi onwe ha n'ụzọ zuru oke n'akụkụ niile, ma ha dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na ndị isi na-emepụta, e nwere ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na ụdị mmepụta ego ị nwere ike ịchọta ndị nchịkwa dabeere na ibe jMicron, nke na-arụ ọrụ ha nke ọma, ọ bụ ezie na ịrụ ọrụ ndị a dị ala karịa ndị ọzọ.
Tụlee obere diski nke kachasị mma n'àgwà ha. Dịka edemede anyị na-eburu ụda nke ụgbọala ahụ n'onwe ya.
Drives ruo 128 GB
Enwere uzo abuo n'udi a. Samsung MZ-7KE128BW na ọnụahịa dị elu ruo 8000 puku rubles na dị ọnụ ala karịa Intel SSDSC2BM120A401, ọnụahịa ya dị iche iche site na 4,000 ruo 5,000 rubles.
A na-eji ihe nlereanya Samsung MZ-7KE128BW eme ihe site n'ịgụ / dee ọsọ ọsọ na ya. N'ihi ahụ dị mkpa, ọ zuru oke maka ntinye na ultrabook. Ọ ga-ekwe omume ịgbatị ọrụ ahụ site n'ịtọkọrịta RAM.
Atụmatụ ndị dị mkpa:
Gụọ ọsọ: 550 Mbps
Dee ọsọ: 470 Mbps
Ịgụ ọsọ ọsọ: 100,000 IOPS
Ejiri ọsọ ọsọ dee: 90000 IOPS
IOPS bụ ọnụ ọgụgụ nke blocks na ọ nwere oge iji dee ma ọ bụ gụọ. Nke a dị elu, ọnụ ọgụgụ dị elu nke arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ngwa SSDSC2BM120A401 nke SS SSCSC2BM120A401 bụ otu n'ime ndị kachasị mma n'etiti "ndị ọrụ nchịkwa" nwere ikikere nke 128 GB. A na-eji ya dị elu ma bụrụ nke zuru oke maka ntinye na ultrabook.
Na-agụ ọsọ: 470 Mbps
Dee ọsọ: 165 Mbps
Ịgụ ọsọ ọsọ: 80000 IOPS
Ịgba ọsọ ọsọ ọsọ: 80000 IOPS
Disk nwere ike si na 128 ruo 240-256 GB
Lee onye nnochite anya kachasị mma bụ ụgbọala. Sandisk SDSSDXPS-240G-G25, nke na-eri ruru 12 puku rubles. A dị ọnụ ala karịa ma ọ bụ nke na-erughị eru OCZ VTR150-25SAT3-240G (ruo 7,000 rubles).
Ihe ndị bụ isi nke CT256MX100SSD1 dị mkpa:
Gụọ ọsọ: 520 Mbps
Dee ọsọ: 550 Mbps
Ịgụ ọsọ ọsọ: 90000 IOPS
Ịgba ọsọ ọsọ ọsọ: 100,000 IOPS
Ihe ndị bụ isi nke OCZ VTR150-25SAT3-240G:
Dee ọsọ: 530 Mbps
Ịgba ọsọ ọsọ ọsọ: 95000 IOPS
Disk na ikike site na 480 GB
Na nke a, onye ndu bụ CT512MX100SSD1 dị mkpa na ọnụ ọgụgụ dị ala nke ruble 17,500. Dị ọnụ ala ADATA Premier SP610 512GB, ego ọ na-efu bụ rubles 7,000.
Ihe ndị bụ isi nke CT512MX100SSD1 dị mkpa:
Dee ọsọ: 500 Mbps
Edee ọsọ ọsọ: 85,000 IOPS
Atụmatụ dị mkpa nke ADATA Premier SP610 512GB:
Gụọ ọsọ: 450 Mbps
Dee ọsọ: 560 Mbps
Ịgụ ọsọ ọsọ: 72000 IOPS
Ejiri ọsọ ọsọ: 73000 IOPS
Ya mere, anyị atụlewo ọtụtụ ntụle maka ịhọrọ SJS. Ugbu a, ị hapụrụ onyinye na, jiri ozi natara, kpebie nke SSD kacha mma maka gị na usoro gị.